Uhlu lokuhlola lomhlinzeki wedatha leSklinks - Ukubuza imibuzo eyiyo | Martech Zone
Kuze kube muva nje, abathengisi bedijithali kanye nabachwepheshe be-ejensi yezikhangiso ababefuna ukwenza ukuthengwa kwezikhangiso zohlelo babebhekene ne- a ibhokisi elimnyama isimo sedatha. Iningi alibona onjiniyela noma ososayensi bedatha, futhi bekufanele bathathe okweqile bethembe futhi bathembe izimangalo zomhlinzeki wedatha mayelana nekhwalithi yedatha, babuyekeze imiphumela ngemuva kokuqaliswa - nangemva kokuthenga okwenziwe.
Kepha yini okufanele abathengisi nezinhlangano babheke kumhlinzeki wedatha? Bangabona kanjani ukuthi yimuphi umhlinzeki onikeza isisombululo esinembe kakhulu, nesibala? Nayi eminye imibuzo ongayibuza:
Idatha iqoqwa kanjani?
Ingabe kungokubhekwa ngqo kwawo wonke umsebenzisi, noma idatha eqondisiwe, lapho kutholakala khona amaphethini wokuziphatha eqenjini elincane labasebenzisi bese ekhishwa ngamaqembu amakhulu? Uma imininingwane icacisiwe, ukunemba kuncike kakhulu kubukhulu beqembu elilinganisiwe - ngakho-ke kubalulekile ukuhlola usayizi weqembu lapho uhlola abahlinzeki. Kepha khumbula ukuthi noma yini usayizi, idatha eqondisiwe ihlala ifaka ukwehla kokunemba lapho kukhishwa ngaphandle. Futhi ungakhohlwa ukuthi lapho idatha ilandelwa ngezigaba, ukubikezela kuzosuselwa ekubikezelweni kunokwaziswa kwangempela. Lokhu kukhuphuka ngamandla kukhulisa ubungozi idatha engeke ikwenze.
Kungumqondo omuhle ukubuza imibuzo ejwayelekile evumela wena ukuthi uhlole amandla wedatha kulo lonke ifaneli, ubheke ngaphesheya kwezibalo zabantu ezilula ukuthola ukuthengiselana, ukulandelela imethadatha nezinye izibonakaliso ezibikezela ngokunembile inhloso yokuthenga. I-Skimlinks ithwebula amasiginali we-15 billion wokuthenga kusuka kunethiwekhi yezizinda zabashicileli abayizigidi eziyi-1.5 nabathengisi abangu-20,000 100 nsuku zonke. Ngokusebenzisa ukufundwa komshini nokuhlaziywa kokunothisa kusendlalelo sabo sobuhlakani bomkhiqizo, ama-Skimlinks aqonda intela nemethadatha yezikhombo zomkhiqizo eziyizigidi eziyi-XNUMX nezixhumanisi. Basebenzisa lolu lwazi ukwakha izigaba zezithameli eziguqula kakhulu ngokususelwa kwimikhiqizo nabasebenzisi bemikhiqizo kungenzeka bathenge, kunika amandla imikhankaso yokubonisa esebenza kahle, yezenhlalo neyamavidiyo.
Uhlobo luni lwedatha oluqoqwayo?
Okulandelayo ohlwini ukuthola ukuthi hlobo luni lwedatha oluqoqiwe. Izigaba zingabandakanya ukuchofoza, izixhumanisi, imethadatha, okuqukethwe kwekhasi, amagama osesho, imikhiqizo nemikhiqizo, imininingwane yamanani entengo, okwenziwayo, usuku nesikhathi. Izinhlobo eziningi zedatha ziqoqwa, amamodeli wokuqagela wezinto ezingavuthiwe kuzodingeka asebenze nawo, angathuthukisa kakhulu ukunemba. Uma kuqoqwa izinhlobo ezimbalwa kuphela zedatha - ngokwesibonelo, okuvelayo noma okuchofozayo kuphela - kuzoba nemininingwane elinganiselwe engasetshenziswa ukuhlola ukubikezela noma ukuthuthukisa amaphrofayli abasebenzisi. Kulesi simo, ubungozi ukuthi amaphrofayili womsebenzisi alula kakhulu futhi anganembile azokwenziwa.
Ama-Skimlinks aqoqa futhi ahlaziye idatha futhi athole amaphethini kubashicileli abaningi nakubathengisi ukubikezela ngokunembile ukuziphatha kokuthenga. Isibonelo, inhlanganisela yomsebenzisi oyedwa ovakashela amakhasi ayi-10 kuwo wonke amawebhusayithi ahlukahlukene angahle akhonjwe njengephethini ekhombisa intshisekelo yokuthenga ngesonto elizayo. Akekho umshicileli oyedwa ongakhipha idatha I-Skimlinks ifinyelela ngenethiwekhi yayo yezizinda eziyizigidi eziyi-1.5, kepha imininingwane yomshicileli iyingxenye eyodwa yedatha yesiginali. I-Skimlinks ibuye ihlaziye idatha etholwe kubathengisi abangu-20,000 XNUMX kunethiwekhi yayo, kufaka phakathi imininingwane yamanani entengo, inani le-oda, nomlando wokuthenga.
Ngokwenza kanjalo, I-Skimlinks ihlanganisa amasiginali avela kuyo yonke imvelo yokuthengisa.
Idatha iqinisekiswa kanjani?
Elinye ikhono elibucayi okufanele ulibheke lapho kuhlolisiswa abahlinzeki bedatha yikhono lokuqinisekisa ukubikezela ngokusebenza. Isibonelo, noma yimuphi umhlinzeki othi amasegimenti awo azoshayela ukuguqulwa kufanele athathe idatha yokwenziwayo ukuqinisekisa ukuthi ukuthenga kuyenzeka. Ngaphandle kwedatha yokuthengiselana, akunakwenzeka ukuqinisekisa isiphakamiso senani.
I-Skimlinks inensizakalo yokuqondiswa kwezithameli ehlelayo esiza abakhangisi ukukhomba abasebenzisi ngokuya ngokuthi bakuphi kumjikelezo wokuthenga. Ukuqagela kwenziwa kusetshenziswa ingqikithi, idatha yamanani entengo, futhi kuqinisekiswa kusetshenziswa imininingwane yokwenziwayo. Abasebenzisi bayalandelelwa ukubheka ukuthi bakwenzile yini ukuthenga obekulindelekile, futhi uhlelo lokufunda lomshini oludala izingxenye luqhubeka nokuqeqeshwa ngokuya ngalolu lwazi. Lokho kusiza abathengi ukuthi bagweme isimo lapho bebhekise khona abathengi okungenzeka ukuthi bacwaninge umkhiqizo abangenakukwazi ukuwukhokhela noma abangenayo inhloso yangempela yokuwuthenga. Umphumela ukusebenza kwengxenye engcono.
Abathengisi bedijithali nama-ejensi abandakanyeka ekukhangiseni okuhleliwe kumele bakhethe umhlinzeki wedatha ofanele ukukhulisa izindleko zabo ngamanani ayizinkulungwane (CPM) noma izindleko zesenzo ngasinye (CPA) rates. Izinga lokukhula emkhakheni wokukhangisa nohlelo lokuqhutshwa kwedatha kungenza kube nzima ukwazi ukuthi ungakhetha kanjani umhlinzeki wedatha ofanele. Kepha ngokusebenzisa le mibuzo emithathu ejwayelekile lapho uhlola isiphakamiso senani lomhlinzeki wedatha, abathengisi bedijithali kanye nama-ejensi bangavula ibhokisi elimnyama futhi bathole ukuxubana kwedatha okulungile.
Tags: chofoza idathaizindleko ngesenzo ngasinyeizindleko ngombono ngamunyecpacpmIdathaumhlinzeki wedathaikhwalithi yedathaukuqinisekiswa kwedathaidatha ye-metaImethadathaUhlelo lokukhangisaababukeli bohleloama-skimlinkidatha yokwenziwayo
Ngempela, Ngempela, Ngifuna Ukusebenzisa Ipulatifomu Yakho… Kepha…